10 qof oo lagu dilay weerar ka dhacay Afghanistan - Worldnews.com
10 qof oo lagu dilay weerar ka dhacay Afghanistan
Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay weerar lagu tuhmayo mintidiinta oo lagu qaaday dhisme dowladeed oo ku yaalla bariga dalka Afghanistan. ...
Afghanistan: Qarax ismiidaamin ah oo lagu dilay 10 qof
Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, afar kalena waa lagu dhaawacay weerar ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka Afghanistan. ......
Ugu yaraan 25 qof ayaa lagu dilay bariga Afghanistan Sabtidii kadib markii qarax ismiidaamin ah lagu qaaday meel ay ciidamada dowladda joogeen. ......
Voa News 2018-06-17
Ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan ayaa la dilay kadib markii maleeshiyo la tuhunsan yahay inay yihiin Taliban ay weerar ku qaadaeen laba bar...
Qarax ka dhacay Afghanistan oo dilay 20 qof
Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu dilay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay bariga dalka Afghanistan, maanta. Saraakiisha ayaa sheegay in qofka weerarka soo qaaday uu isku...
Kabul: Weerar Dad Badan Lagu Dilay oo lagu Qaaday Masjid
Weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday masjid shiicada ay ku tukadaan oo ku yaalla magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa lagu dilay 16 qof oo ay ku jiraan...
29 Qof oo ku Dhimatay Qarax ka Dhacay Afghanistan
Qarax baabuur oo aad u weyn oo ka dhacay gobolka ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan ee Helmand, ayaa dilay ugu yaraan 29 qof, islamarkaana dhaawacay in ka badan 60 kale....
Qarax baabuur oo aad u weyn oo ka dhacay gobolka ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan ee Helmand, ayaa dilay ugu yaraan 29 qof, islamarkaana dhaawacay in ka badan 60 kale. ......
​29 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay Afghanistan
Qarax baabuur oo aad u weyn oo ka dhacay gobolka ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan ee Helmand, ayaa dilay ugu yaraan 29 qof, islamarkaana dhaawacay in ka badan 60 kale. Goobjoogeyaal ayaa sheegay in askar iyo shaqaale dowladeed ay isugu soo baxeen dibedda bankiga New Kabul ee magaalada caasimadda u ah gobolka ee Lashkargah, si...
Afghanistan: Dad is qarxiyay oo baabi\_'iyay saldhig ciidan
Ugu yaraan 43 askeri ayaa ku dhimatay ka dib markii laba weerar oo is qarxin ah lagu qaaday saldhig militari oo ku yaalla gobolka Kandahar ee Koonfurta Afghanistan. Sida wararku sheegayaan sagaal qof ayaa dhaawacantay, lix kalena waa la la'yahay. Toban xagjiriin ah oo weerarka qaaday ayaa sidoo kale dhimatay, sida la sheegay. Weerarka oo ka dhacay degmo lagu magacaabo Maiwand,...
Ugu yaraan 43 askari oo lagu dilay Afghanistan
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay ugu yaraan 43 askari ku dhinteen weerar ay Taliban ku qaaday saldhig milatari oo ku yaalla gobolka Kandahar. Warkan ka soo baxay wasaaradda difaaca ayaa lagu sheegay in sagaal askari ay dhaawacmeen lix kalana lagu la yahay weerarkaas...
Musharax u taagnaa doorashooyinka baarlamanka dalka Afghanistan ayaa maanta lagu dilay weerar bombaano oo lagu qaaday xafiiskiisa, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Helmand. ......